asthma – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ Q. ဆရာရှင့် သားလေးက အသက် ၆ နှစ်ပါ။ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ ခံစားနေရပါတယ်။ အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံးပျောက်အောင် ကုသချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးဖြစ်ဖြစ် အကြံပေးပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ နှစ်စဉ်မေလရဲ့ ပဌမအင်္ဂါနေ့ကို ကမ္ဘာ့ပန်းနာရောဂါနေ့လို့ သတ်မှတ်တာမို့ ဒီစာက ရာသီစာဖြစ်သွားရော။ မေးတဲ့လူကို...
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူတွေက ပိုမိုမောပန်းရတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်စေဖို့ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ရှိသူတို့ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီစားသင့်တဲ့ အစားအစာ ၁၅ မျိုးရှိပါတယ်။ ကန်ဇွန်းဥ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဖရဲသီး၊ သင်္ဘောသီး၊ ဆလတ်ရွက်၊ မုန်လာဥနီ၊ ဟင်းနုနယ်ရွက် ဘာကြောင့်လဲ – အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များစွာ...
မေး ။ ရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်ပုံအစ သိချင်လို့ပါရှင့်။ ဆူးခင်းလမ်း (Fb) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ရင်ကျပ်ပန်းနာရောဂါ(Asthma)ဆိုတာ ဓာတ်မတည့်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မတည့်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ထိတွေ့မိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စားသောက်မိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊...
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဇွန်လရောက်တိုင်း နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့သို့ ပန်းနာရင်ကျပ်ဝေဒနာရှင်တွေ စုဝေးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရိုးရာဖော်စပ်ထားတဲ့ အ၀ါရောင်ဆေးအနှစ်နဲ့ မံထားတဲ့ မုရယ် (murrel)ငါးအရှင်ကို မျိုချဖို့ ရောက်လာကြတာပါ။ ဒီဆေးနည်းကို ဘက်တီနီဂေါက် မိသားစုက ၁၈၄၅...
ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်တဲ့အခါ . . .
မေး ။ ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုအစားအစာတွေ ရှောင်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲ၊ အရေးပေါ် ဘယ်ဆေးတွေဆောင်ရမလဲ။ Nge Lay (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်စေတဲ့မတည့်တဲ့ အရာတွေကို ရှောင်ပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူတတ်ပါ။ ဥပမာ...
ကလေးများတွင် ဖြစ်တတ်သည့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တာဝန်ခံ၊အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ။ ကလေးတွေမှာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ ။ ကလေးတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါက နာတာရှည်ရောဂါလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အသက်...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူအတွက် သီးသန့်အစားအသောက်ရယ်လို့ မရှိပေမယ့် ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အစားအသောက်တချို့နဲ့ မတည့်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စားရမယ့်အစာ၊ ရှောင်ရမယ့်အစာဆိုတာ ရှိလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူတွေမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံရှိဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူတို့ စားသင့်သည့်အစားအသောက်များ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူတွေ အဓိကစားသင့်တာက ဗီတာမင်စီ၊...
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါထခြင်းကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်မည့် ဖျော်ရည်များ
၊ မီမိုး(ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါထစေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ရှောင်တာ ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြား တဲ့ ဆေးတွေကိုမှီဝဲတာ စတဲ့နည်းတွေနဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ ဖျော်ရည်တွေကို ရွေးသောက်ရင်လည်း ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါထခြင်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ – ပန်းသီးဖျော်ရည် ပန်းသီးဖျော်ရည်မှာ...
ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ သက်သာစေမည့် မုန်လာဥနီဖျော်ရည်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ
၊ လရိပ်မေ ၊ – မုန်လာဥနီ ၁၀ တောင့်၊ – ဟင်းနုနယ်ရွက် လက်တစ်ဆုပ်စာ၊ – ကြက်သွန်ဖြူ နှစ်မြွှာ(အခွံနွှာထားပါ)၊ – သံပရာသီးတစ်လုံး (ထက်ခြမ်း ခြမ်းထားပါ)၊ – ပန်းသီးတစ်လုံး။ ပြုလုပ်နည်း မုန်လာဥနီ၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်၊...